Talyaaniinta Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad Talismans
amulet nasiibka nasiib Dharka & Farshaxanada Xirfadaha Sanduuqa Bacda nasiib Amulet 512508
Iibinta kulul ee Talisman ee nabada (Duco laba-geesood ah) Mawjadda lagu Dhoobay Diy Embroidery Kit waxay isticmaashaa daabac gacmeed saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
amulet nasiibka nasiib Dharka & Farshaxanimada Xirmooyinka Sanduuqa Bacda nasiib Amulet 512509
Iibinta kulul ee Talisman ee nabada (Farxad laba jibaaran) Mawduuc lagu qurxiyo Diy Embroidery Kit wuxuu isticmaalaa daabac gacmeed saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
amulet nasiibka nasiib Dharka & Farshaxanada Xirfadaha Sanduuqa Boorsada nasiib Amulet 512530
Omamori-iibinta kulul (Ilaahay ha barakeeyo) Mawjadda Dij Embroidery Kit xirmada gacan-sameys ah oo lagu sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
amulet nasiib & Dhar farshaxan Xaraashka Sanduuqa Bacda nasiib Amulet 512531
amulet nasiibka nasiib Dharka & Fabric Farshaxan Xaramka Bacda nasiib Amulet 512532
Omamori (duck) Dunta Tilmaameysan Diy Embroidery Kit adeegso gacmo - lagu sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si ay u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
amulet nasiib & Dhar farshaxan gacmeed Sanduuqa boorsada nasiib Amulet 512533
Omamori-iibinta kulul (Noqo shinbir qurxoon) Dunta Tilmaamaysa Diy Cid Kabadhu isticmaasho gacmo - lagu farsameeyo daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
amulet nasiib & Dhar farshaxan Xaraashka Sanduuqa Bacda nasiib Amulet 512536
Omamori (parvenu) Xaraashka lagu iibiyo Dij Embroidery Kit wuxuu isticmaalaa daabac gacmeed laga sameeyay saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si ay u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
amulet nasiib & Dhar farshaxan Xaraashka Sanduuqa Bacda nasiib Amulet 512535
Omamori-iibinta kulul (Ha cunin baruur) Xarkaha daabac leh Diy Caanbixiyaha Qalabka wuxuu isticmaalaa daabac gacmeed laga sameeyay saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
amulet nasiibka nasiib Dharka & Fabric Farsamooyinka Sanduuqa Bacda nasiib Amulet 512560
Omamori (Badbaadada) Mawjadda Xaraashka ah ee Diy Embroidery Kit waxay adeegsataa daabac gacmeed laga sameeyay saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
amulet nasiibka nasiib Dharka & Farshaxanada Xirfadaha Sanduuqa Bacda nasiib Amulet 512561
Omamori-ku-iibinta kulul (Jacaylka aad u leedahay) Mawjadda lagu Dhoobay Diy Embroidery Kit waxay isticmaashaa daabac gacmeed laga sameeyay saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si ay u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.